वायु प्रदूषणको असर सर्जिकल मास्कले रोक्दैन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
वायु प्रदूषणको असर सर्जिकल मास्कले रोक्दैन
केही साता यता काठमाडौं उपत्यकामा फैलिएको वायु प्रदूषणको असर सर्जिकल मास्कले नरोक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो मास्कले बाक्लो धुलोका कणलाई मात्र रोक्ने तर, मिहिन धुलोका कणलाई नरोक्ने हुँदा यस्तो बेला एन ९५ जस्ता मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने छाती रोग विशेषज्ञ डा. नविन मिश्र बताउँछन् ।
‘अहिले धेरैजसो मानिसले सर्जिकल मास्क प्रयोग गरिरहेको देख्छु । तर, यो मास्कले वायु प्रदूषणलाई रोक्दैन । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा एन ९५ मास्क लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्जिकल मास्कले १० माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कणलाई छेक्दैन । तर, एन ९५ मास्कमा फिल्टर हुने भएकाले ०.३ माइक्रोनसम्मका धुलोका कणलाई रोक्छ ।’
वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च रहेको बेलामा मिहिन धुलोका कण पृथ्वीको सतहमै रहेका हुन्छन् । त्यसैले, सुरक्षित मास्कको प्रयोग नगर्दा ती मिहिन धुलोका कण फोक्सोको भित्री तहमा पुगेर टाँसिन्छन् । यस्ता धुलोका कणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पार्ने भएकाले सुरक्षित मास्क लगाउनुपर्ने अर्का छाती रोग विशेषज्ञ डा. राजु पंगेनीको तर्क छ । ‘वायु प्रदूषणका बेला मिहिन धुलोका कण सतहमै रहन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा घरबाहिर हिँड्डुल गर्दा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट ती धुलोका कण शरीरभित्र प्रवेश गर्छन् । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ प्रदूषण बढिरहेको अवस्थामा सावधानी नअपनाउँदा फोक्सो क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, रक्तक्यान्सर, दम, एलर्जी हुने सम्भावना धेरै हुने डा. मिश्र बताउँछन् ।
काठमाडौंमा बढिरहेको वायू प्रदूषण अझै नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । उच्च वायुमण्डलमा भएको स्थिरताका कारण वायु प्रदूषण फेरि बढ्न थालेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समिर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘केही दिनअघि छिटपुट वर्षा भएतापनि पश्चिमबाट वायुमा धुलो धुवाँ मिसिएर आउने क्रम अझै रोकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ती धुलो र धुवाँ वायु मण्डलको माथिल्लो तहमा स्थिर भएर बसेको छ । हावा र भारी वर्षा नुहँदा वायु प्रदूषण हटेन ।’
त्यसैले, अहिलेको वायु प्रदूषण हट्नका लागि माथिल्लो वायुमण्डलमा हावा चल्नुपर्ने कि त भारी वर्षा हुनुपर्ने जल तथा मौसमविद ङमिन्द्र दाहाल बताउँछन् । ‘काठमाडौं उपत्यकामा केही सातादेखि बढेको वायू प्रदूषणको मात्रा अझै पनि घटेको छैन,’ उनले भने, ‘यो प्रदूषण हट्नका लागि कि भारी वर्षा हुनुपर्छ कि त ठूलो हावाहुरी चल्नुपर्छ, नभए यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ ।’
अहिले काठमाडौंको वायु गुणस्तर सूचक २९६ छ । यसलाई घातक मानिन्छ । यतिबेला सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आकाशमा बादल भएपनि अन्य प्रदेशमा भने बादल छैन, जसले मौसम सफा छ भन्न सकिन्छ । तर, धुलो धुवाँले आकाश ढाकेको हुनाले सूर्यको किरण पृथ्वीमा आउन नसकेको मौसमविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । यो प्रदूषण हट्न पश्चिमी वायु प्रणालीको राम्रो विकास हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।